IATA: Rakaabka Ku Kalsoon Amniga Badbaadada, Taageerada Maaskarada-Taageerada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » IATA: Rakaabka Ku Kalsoon Amniga Badbaadada, Taageerada Maaskarada-Taageerada
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Inta badan safarradu waxay ku kalsoon yihiin badbaadada safarka hawada iyo taageerada maaskaro-qaadashada muddada-dhow.
85% rakaabka waxay rumeysan yihiin in diyaaradaha si fiican loo nadiifiyo loona jeermis dilo.
65% rakaabku waxay oggol yihiin hawada diyaaraddu inay nadiif u tahay qolka qalliinka.
89% rakaabku waxay rumaysan yihiin in tallaabooyinka ilaalinta si fiican loo hirgeliyey.
International Ururka Gaadiidka Cirka (IATA) ayaa soo warisay in iyadoo lagu saleynayo sahankeedii ugu dambeeyay ee rakaabka ee la sameeyay bishii Juun, inta badan safarayaasha hawada ay ku kalsoon yihiin amniga safarka hawada iyo taageerista maaskaro ee muddada dhow. Si kastaba ha noqotee, aqlabiyadda ayaa sidoo kale ku jahwareersan "qodobka dhibta leh" ee ku xeeran nidaamyada COVID-19, oo ay ku jiraan jahwareerka iyo hubin la'aanta ku saabsan sharciyada safarka, shuruudaha baaritaanka, iyo kharashyada imtixaanka ee xad-dhaafka ah.
Sahaminta 4,700 oo safar ah 11 suuq oo adduunka ah waxay muujineysaa:
85% waxay rumaysan yihiin in diyaaradaha si fiican loo nadiifiyey oo jeermiska loo diley
65% waxay ku heshiiyeen hawada diyaaraddu inay nadiif u tahay qolka qalliinka
Kuwa safray tan iyo Juun 2020, 86% waxay dareemeen badbaado sababo la xiriira tallaabooyinka COVID-19:
89% waxay rumaysan yihiin in tallaabooyinka ilaalinta si fiican loo hirgeliyey
90% waxay aaminsan yihiin in shaqaalaha diyaaradaha ay shaqo fiican ka qabtaan fulinta talaabooyinka
Rakaabku waxay si xoog leh u taageeraan maaskaro xiran (83%) iyo fulinta adag ee xeerarka maaskaro (86%), laakiin aqlabiyaddu waxay kaloo aaminsan yihiin in shuruudaha maaskarada loo baahan yahay in sida ugu dhakhsaha badan loo dhammeeyo.
“Safrayaasha diyaaraduhu waxay aqoonsadaan oo ay qiimeeyaan tallaabooyinka nabadgelyo ee loo dejiyay si loo yareeyo halista gudbinta COVID-19 inta lagu jiro safarka hawada. Waxayna taageerayaan sii socoshada tallaabooyinkan inta loo baahdo, laakiin sidoo kale ma doonayaan inay tallaabooyinku noqdaan kuwo joogto ah. Dhanka kale, dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan ixtiraamno sharciyada iyo nabadgelyada rakaabka la socda. Waa wax aan la aqbali karin in shilalka rakaabka ee aan sharciga waafaqsaneyn ay laba jibaarmeen marka loo eego sanadka 2019, kororka anshax xumada jir ahaaneed ayaa sabab gaar ah u leh walaac weyn, ”ayuu yiri Willie Walsh, agaasimaha guud ee IATA.